Kọmitii Alaka na-elekọta ya. O nwere ndị Òtù Na-achị Isi na-ahọpụta n’alaka ụlọ ọrụ ọ bụla ka ha na-ahụ maka ọrụ niile a na-arụ n’alaka ụlọ ọrụ ahụ. A na-akpọ ha Kọmitii Alaka. Ha na-adị ndị okenye atọ ma ọ bụ karịa. Ọ bụ ha na-agwa Òtù Na-achị Isi otú ihe si na-aga ná mba ahụ nakwa ná mba ndị ọzọ ha na-elekọta. E nweekwa nsogbu ọ bụla, ha agwa ha. Ihe ndị ahụ ha na-agwa Òtù Na-achị Isi na-enyere ha aka ịma ihe a ga-ebipụta n’akwụkwọ anyị. Ọ na-enyekwara ha aka ikpebi ihe a ga-amụ n’ọmụmụ ihe nakwa ná mgbakọ anyị dị iche iche. O nwere ndị Òtù Na-achị Isi na-eziga ka ha gaa leta alaka ụlọ ọrụ dị iche iche. A na-akpọ ha ndị nlekọta zoonu. Ha bịa n’alaka ụlọ ọrụ ọ bụla, ha agwa Kọmitii Alaka ihe ndị ga-enyere ha aka ịrụ ọrụ ha nke ọma. (Ilu 11:14) N’alaka ụlọ ọrụ ọ bụla onye nlekọta zoonu bịara, a na-eme ndokwa ka ọ gwa ụmụnna okwu pụrụ iche ga-agba ha ume.
A na-anọ na ya ahazi otú ihe ga-esi na-aga n’ọgbakọ. N’alaka ụlọ ọrụ, o nwere ndị e nyere ọrụ ka ha na-ehiwe ọgbakọ ọhụrụ. Ha na-ahụkwa maka ịhọpụta ndị okenye na ndị ohu na-eje ozi. Ọ bụ ụmụnna ndị a na-ahụ maka ndị ọsụ ụzọ, ndị ozi ala ọzọ, ndị nlekọta sekit na ndị nlekọta distrikti e nwere n’ebe niile alaka ụlọ ọrụ ahụ na-elekọta. Ha na-agwa ọgbakọ mgbe ha ga-aga mgbakọ pụrụ iche, mgbakọ sekit na mgbakọ distrikti. O nwere ụmụnna ndị na-ahụ maka iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze ọhụrụ, nwee ndị na-ahụ maka ibugara ọgbakọ dị iche iche akwụkwọ. Ọrụ niile a na-arụ n’alaka ụlọ ọrụ na-enye aka eme ka ọrụ ikwusa ozi ọma na-aga n’usoro.—1 Ndị Kọrịnt 14:33, 40.
mailto:?body=Gịnị Ka A Na-eme n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012163%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka A Na-eme n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova?